Global Voices teny Malagasy » Okraina: Ny “Photo Art” Dia Manampy Amin’ny Ady Atao Amin’ny SIDA · Global Voices teny Malagasy » Print
Okraina: Ny “Photo Art” Dia Manampy Amin'ny Ady Atao Amin'ny SIDA
Voadika ny 24 Janoary 2012 17:20 GMT 1	 · Mpanoratra Maryna Reshetnyak Nandika Candy
Sokajy: Dika, Mediam-bahoaka, Rising Voices
Tamin'ny fotoana nankalazàna ny Andro Eran-tany Ho An'ny SIDA  (Novambra –Desambra, 2011) dia nisy fampirantiana ny sary avy tamin'ny tetikasa “AIDS- Open Faces” natao tao amin'ny tranoheva ‘Lavra’  tao Kiev. Ny fampirantiana dia natokana manontolo ho an'ireo olona mitondra ny VIH/SIDA ary nokarakarain'ny Elena Pinchuk AINTIAIDS Foundation . fikambanana mpanao asa soa tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny sarin'ireo olona mitondra ny VIH sy ny fianakavian'izy ireo izay naseho tamin'ny fampirantiana dia nalain'i Brent Stirton mpaka sary fanta-daza avy ao amin'ny masoivoho ‘Getty Images’  avy any New York.
Ireo sary naseho tamin'ny fampirantiana (hita ao amin'ny aterineto ) dia mahatalanjona tokoa ary maro amin'izy ireo no tsy mora ny mijery azy. I Brent Stirton niaraka taminà mafàna fo avy ao amin'ilay fikambanana sy ONG mpiara-miombon'antoka hafa dia namakivaky an'i Okraina ary naka sary ireo ankizy teny an-dàlana tao Odessa, ny toeram-ponenan'ireo mpivenjivenjy (tsiganes), ireo fianakaviana miaraka aminà ankizy voan'ny VIH sy ireo zaza kamboty miaina miaraka amin'ny otrikaretina VIH, ireo mpitsindrona zava-mahadomelina, ireo mpivarotena sy ireo olona voafonja, araka ny tatitra avy ao amin'ny tranonkalan'ny  AITIAIDS Foundation. Ilay tetikasa dia feno ny sarin'ireo olona tena marary mafy ka hatramin'ireo ‘tantara tsara fiafàra’ – sarin'ireo olona novonjena tamin'ny alalan'ny fitsaboana “antiretroviral”  izay malalaka ny fahazoana azy ao Okraina amin'izao fotoana noho ny fanohanana iraisam-pirenena na ny sarin'ireo olona izay nampitsahatra ny fidorohana zava-mahadomelina na ny sarin'ireo zaza kamboty mitondra ny VIH ka nahita fianakaviana vaovao.
Izany no fotoana faharoa nandehanan'i Brent Stirton tao Okraina mba haka sary ireo olona mitondra ny VIH. Ny voalohany kosa dia tamin'ny 2005. Tao anatin'ny lahatsariny i Stirton dia mampitaha ny fahatsapàny tamin'ny sariny voalohany sy ny faharoa.
I Olga Ivanenko , mpanao gazety sady bilaogera, nanampy an'i Brent Stirton tamin'ny fikarakaràna ny fakàna ny sary tao Okraina ny taona 2005 sy 2011 dia nizara ny fahatsiarovany ny fampandehanana ilay tetikasa tao amin'ny bilaoginy. Manoratra  izy hoe:
Ny taona 2005 dia nandray anjara taminà tetikasa iray aho – Nanampy mpaka sary vahiny iraisam-pirenena iray aho tamin'ny asany mikasika ny tetikasa raki-tsary fanadihadiana mikasika ny VIH/SIDA ao Okraina. Na dia eo aza ny famerana ny fampiasàna ireo sary ireo, dia mbola mitohy miaina ny fiainany manokana any anaty aterineto ny sarin'i Brent Stirton. Tena azo hiadian-kevitra sy feno fihantsiana mihitsy izy ireo, natao anjorom-bala izy ireo ka izany no antony nahatonga azy ho voateny lava sy voakiana foana.
Tamin'ity taona ity i Brent Stirton dia tonga indray ary naka andian-tsary fanadihadiana maromaro mikasika ny VIH/SIDA ao Okraina. Nifankahita tamin'ireo mahery fo sasantsasany nalaina sary tany aloha izahay. Tena nahafinaritra ny nifankahita tamin'ny sasany tamin'izy ireo – tena afaka nanomboka fiainana vaovao izy ireo, nahita mpanohana, nanomboka nandray ny fitsaboana “antiretroviral”. Ny fihaonana tamin'ny hafa kosa dia nahasosotra – tsy nanova ny fiainana nahazatra azy izy ireo, ary niha antitra (toa hafahafa izany teny izany raha ampiasaina amin'ny olona manodidina ny 25-30 taona). Ny sasany tamin'izy ireo aza moa dia efa maty. Enin-taona lasa izay dia nifankahita tamin'ny olona mahatalanjona izahay. Rehefa natao ny fizahàna azy ireo ka fantatra fa mitondra ny VIH izy dia nahiliky ny fianakaviany sy ny namany, voaroaka tamin'ny asany izy ireo, norahonana… Kanefa mbola nijoro ihany. Noporofoiny tamin'ny tenany sy tamin'ny hafa fa mahery izy ireo ary mitohy ny fiainana. Kanefa ny fiainany ankehitriny dia miankina tanteraka fandraisany zava-mahadomelina manaraka lamina. Ary, indrisy, amin'ny fahalalàna na hofenoin'ny governemanta ihany na tsia ilay tolotra vaovao mba hividianana ny fanafody “antiretroviral”.
Nanamarika i Olga fa ny fandraisana anjara amin'ny tetikasa sary dia nanova tanteraka ny fitsaratsaram-poana mikasika ny olona mitondra ny VIH. Namoaka izy  fa:
Ny sasan-tsasany tamin'ireo mahery fon'ny tantara dia mamadika tanteraka ny hevitro mikasika ireo nahatsapa tena ho latsaka ambany. Tsy maninona ny hoe fomba ahoana no nahalatsahan'ny olona, maro amin'izy ireo no mbola afaka mijanona ho olombelona – mikarakara ny reniny izay malemy na mitaintaina momba ireo vady aman-janany ary manao ny fomba rehetra mba hiarovana azy ireo.
Mieritreritra i Olga fa ny asa lehibe indrindra amin'ilay tetikasa dia ny manao izay hampieritreritra ny fiarahamonina mikasika ireo olona tratry ny VIH/SIDA. Manoratra  izy hoe:
Ny tapany faharoa amin'ilay tetikasa dia somary feno fihantsiana sy azo hiadian-kevitra. Izany koa dia mitarika onjanà adihevitra ihany mikasika ny olona mitondra ny VIH sy ny amin'ny maha mendrika ny fanehoana izany na tsia. Tsara ny adihevitra. Izahay rehetra, izay tafiditra amin'ilay tetikasa, dia mino fa ampahany amin'ny fiainantsika izany ka tokony resahana. Tsy afaka fotsiny ny hanakipy ny masonao ianao ka hilaza hoe: “I do not see this, so it does not exists” na “Tsy mahita izany aho, noho izany dia tsy misy izany zavatra izany”. Raha mampieritreritra sy manova zavatra eo amin'ny fiainana izany farafaharatsiny olona iray, dia tsy ho lany tamin'ny tsy misy dikany ny fotoana sy ny ezaka rehetra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/01/24/27363/
 Andro Eran-tany Ho An'ny SIDA : http://en.wikipedia.org/wiki/World_AIDS_Day
 Elena Pinchuk AINTIAIDS Foundation: http://antiaids.org/en
 Brent Stirton : http://www.brentstirton.com/bio.php
 Getty Images’: http://www.gettyimages.com/Search/Search.aspx?query=z.i.H4sIAAAAAAAEAOy9B2AcSZYlJi9tynt_SvVK1-B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee--999577733ujudTif33_8_XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9-fB8_In7dfLn91etf49f4NX6PX_dskV3kvyb9-pj-_xs_qfNlm75ui7qtlr_mCJ__Gr_Or3HD82uan0ldVe3LrM4Wza-tn_1a-P_uDn793U373wz__Mb0_1_v3evr5vSdgfFren_zu9m5-fXX1N8B7tfOzqe2S_8P9Plr7nCPi9a9uWh_Xf39t_g1LDL865779Z779b77dZ9__XWoj9LCs3-hu1-X_qgXFpvwz18fH-3ir1-PP59YGJ2_-bXzEIr9k6HsWCjnHSjub36tNq91_mQoexZK3YHi_iaC5hYG_mCq_hpK3V18-huarzGHPCVEk3xlPv01g79-7XzS2G_MHzxHucPB-_3Xyl1z7_dfu1mt7Of4w-D4W9kXL6fuxcupYcDfEn_v2N_27W88lF-nqj3-s3_xV5Pc_8r8hefXnl0tze-_pvkDYvLrNGtvtMFfv3aeOfz8P-j3lf-F_ePXbQJo4Z-_9rtnz50Q0B_2i6z2cPP--I2aabXKn6yXs9IjcfCpAfjjgPNg5z5-_3WIw9a2efDXrzOv5Q-hEP4yED4GhL29T_E7MZGTRv-PX-9FfpU37f8TAAD__0ccjj2NBAAA&sx=AllEditorial#
 tatitra avy ao amin'ny tranonkalan'ny: http://antiaids.org/ru/about/news/10048
 fitsaboana “antiretroviral”: http://en.wikipedia.org/wiki/Antiretroviral_drug
 Olga Ivanenko : http://my.korrespondent.net/user/31500/publications/blogs